Blogger of this week: Bhojraj Dahal - MeroReport
Blogger of this week: Bhojraj Dahal
ईलाम नगरपालिका वडा नं दुई स्थायी बसोबास भएका भोजराज दाहाल हाल कपन, काठमान्डौमा बस्छन् । ब्लगिङ र पत्रकारिता रुची राख्ने उनले नेपालडायरी नामक ब्लग नियमित अपडेट गर्छन् र सामाजिक मिडियासम्बन्धी बहसमा पनि भाग लिन्छन् । नेपालका शुरुवाती ब्लगर मध्ये एक दाहाल यस पटक साताको ब्लगर बन्न सफल भएका छन् । उनीसितको छोटो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ:
आफ्नो ब्लगिङको इतिहास बताइदिनुस् न ? तपाईं कसरी ब्लगिङमा आकर्षित हुनु भयो ? कहिले देखि ब्लगिङ सुरु गर्नु भयो ?
मैले ब्लग लेखन सन् २००५बाट सुरु गरेको हुँ । जतीबेला राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजाको सासनकालमा आफुले देखेका र भोगेका कुरा प्रस्ट लेख्न नपाउँदा ब्लगलाई त्यो लेख्ने माध्यमको रुपमा मैले ब्लगिङ सुरु गरेको हो ।
सुर सुरुमा टेक्निकल ज्ञानको कमी र नेपालमा ईन्टरनेटको उपलब्ध्ता पनि त्यती नहुँदा केही कठिनाई त भयो तर पनि त्यसलाई सजह रुपमै लिए मैले । ब्लग सुरु गर्दा प्राविधिक कुरामा माइसंसारका उमेश श्रेष्ठ, पत्रकार उज्जल आचार्यको सहयोग अबसमरणीय छ ।
तपाईं कुन बिधामा ब्लगिङ गर्नु हुन्छ ? आफ्नो ब्लगमा के कस्ता बिषयबस्तु समाबेश गर्नुहुन्छ ?
प्राय म राजनीतिक बिषयबस्तुसँग सम्बन्धित कुराको बारेमा ब्लग लेख्छु । मलाई राजनीतिक बिषयबस्तुमा प्राय रुची छ ।
एकैछिन तपाईंको ब्लगको लेखहरुको कुरा गरौँ । पछील्लो पटक कुन बिषयमा के लेख लेख्नुभयो ? के कुराले लेख्न अभिप्रेरित गर्‍यो ?
पछिल्लो पटक लेखेको ब्लग पनि राजनीतिक बिषयबस्तु सँग नै सम्बन्धित छ । अली ब्यंग्यात्मक छ पछील्लो पोस्ट । देशको राजनितीक अब्यबस्था, र भाँडभैलो देखेर दिक्क लाग्छ अनी नलेखेर के गर्नु ?
ब्लगमा मैले उत्साहजनक प्रतिकृया पाएको छु । ब्लग को बिशेषता भनेको निरन्तर लेखन हो । मैले निरन्तरता दिन सकेको छैन पछिल्लो केही समयदेखी । निरन्तर लेखिरहन सके पाठक को संख्या बढ्न सक्छ ।
ब्लगिङ गर्दाको रमाइको अनुभवमध्ये एउटा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । हालका प्रम अर्थमन्त्री भएको बेला मैले उहालाई सम्बोधन गरेर लेखेको पानीपत्र पढेर उहाँले चासो राख्नुभएछ र एक दिन उहाँका स्वकिय सचीबमार्फत बोलाउनु भयो । तर बिबिध कारणले त्यती बेला अरु कुरा हुन पाएन । हाल उहाँ प्रम भएपछी पनि मैले त्यो पानीपत्रमा लेखेको "आकासे पानी संकलन"को बारेमा चासो राख्नु भएको छ । "आकासे पानी" संकलनले हाल काठमान्डुको पानीको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा प्रम पनि कन्भिन्स हुनु भएको छ मैले लेखेको त्यो पत्रबाट ।
नेपाली ब्लग क्षेत्रलाइ कसरी नियाल्नुभएको छ? नेपालमा ब्लग क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ ?
निश्चय पनि हाल नेपालमा ब्लग आफ्नो धारणा र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता व्यक्त गर्ने एउटा राम्रो माध्यमको रुपमा बिकास भएको छ । आफुलाई लागेका र समाजमा आफुले देखेका कुराहरुलाई युवापुस्ताले ब्लगमार्फत प्रकट गरिरहनुभएको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा आर्थिक बिषय, टेक्नोलोजी र अन्य क्षेत्रका ब्लगहरु पनी लेखिन थालेका छन । निश्चय नै यो खुशीको कुरा हो ।
हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन्, http://meroreport.net/page/code-of-ethics-for-bloggers, http://www.nepalivoices.com/nepal-blog/2011/07/27/historic-bloggers-sign-code-of-ethics/, तपाइलाइ के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ र किन?
नेपालमा ब्लग अचार संहिता चाहिन्छ भन्ने र अचार संहितामा हस्ताक्षर गर्ने म आफु पनि एक हुँ । ब्लगरको हकहितको लागि र भोली आइ पर्नसक्ने चुनैतीका लागी ब्लगर एक हुन सकुन् र आफ्नो ब्लगलाई ब्यबस्थित र मर्यादित बनाउन् भन्ने उद्देश्यले यो आचार संहिता बनाइएको हो । ब्लग पनि एक नागरिक पत्रकारीता हो । ब्लगरले आफ्नो कुरा लेख्दा समाज र देशलाई नकरात्मक प्रभाव नपर्ने गरी, सामाजिक मर्यादामा बसेर, सभ्य भाषामा ब्लग लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि मान्यता छ ।
अब एकै छिन मेरोरिपोर्टको बारेमा कुरा गरौँ । नेपालमा नागरिक पत्रकारिता प्रवर्धन गर्न सामाजिक संजालका रूपमा मेरोरिपोर्ट meroreport.net सुरू भएको छ। मेरो रिपोर्टको बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?
नागरिक पत्रकारिताको बिकास र बिस्तारमा ठोस योगदान पुर्याउने र यसमा काम गर्नेहरुका लागि एउटा साझा प्लेटफर्म तयार गर्ने उद्देश्यले मेरोरिपोर्ट डट नेटको सुरुवात भएको छ । नेपालमा नागरिक पत्रकारिताको सुरुवातका लागि भएको संभवत यो पहिलो सामुहिक र संस्थागत प्रयास हो । नागरिक पत्रकारिता गर्ने र गर्न चाहनेहरुका लागी मेरोरिपोर्टले गरेको सुरुवातलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । नेपालमा नागरिक पत्रकारीताको क्षेत्रमा धेरै चुनौती र संभावना छन् ।
नेपाल जस्तो अल्पबिकसित र प्रजातन्त्रको अभ्यासमा बामे सर्दै गरेको मुलुकका लागि नागरिक पत्रकारिता समाज परिवर्तनको लागि सशक्त माध्यम हुनसक्छ । तर पनि नेपाल कम जनसंख्याको मात्र इन्टरनेटमा पहुँच भएको मुलुक हो । नागरिक पत्रकारिताको ब्यापक बहस र प्रचार बिना यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन । नागरिक पत्रकारिताको बारेमा सिमित बर्गलाई मात्र जानकारी हुनु, दक्ष जनशक्ति र तालिमको अभाव हुनु र श्रोत र साधन (बिशेष गरेर ईन्टरनेट)को कमीका कारण हामी नागरिक पत्रकारिताको पनि बामे सर्ने स्थितिमा नै छौँ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
मेरोरिपोर्टले हालै नेपालमा पनि नागरिक पत्रकारिताको दिगो र संस्थागत बिकास गर्ने उद्देश्यले जुन एउटा पहल सुरु गरेको छ यस्लाई निरन्तरता दिदै जाओस र नेपालमा नगरिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका र काम गर्न चाहनेहरुलाई एउटै थलोमा जम्मा गरेर यसको बिकास र बिस्तारलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको मेरोरिपोर्टको यो प्रयास पक्कै पनि नगरिक पत्रकारिताको सँस्थागत बिकासमा एउटा सुखद सुरुवात हो । देशभरी छरिएर रहेका नगरिक पत्रकारको क्षमता र सिपमा समय सापेक्ष बिकास गर्दै, नागरिक पत्रकारितालाई एउटा सशक्त र बैकल्पिक पत्रकारिताको बिकास गर्न मेरोरिपोर्ट सफल रहोस् । शुभकामना ।
भोजराजको ब्लग: http://www.nepaldiary.wordpress.com
Comment by Ajeeta Sigdel on February 6, 2012 at 12:01pm
Comment by Sabin Pravat on February 3, 2012 at 1:01pm
Congrats and Thanks A lot !!
Comment by Braj dahal on February 2, 2012 at 12:38am
धन्यवाद , यो मौका दिएकोमा मेरो रिपोर्ट लाई । अबस्य म मेरो रिपोर्टमा पनि सहभागि हुने कोशीस गर्नेछु ।
Comment by Aakar Anil on February 1, 2012 at 8:41pm
बधाई छ दाजु! केही थाहा नपाएका कुरा थाहा पाइयो ! :)
Comment by Indra Dhoj Kshetri on February 1, 2012 at 7:33pm
साताको ब्लगर हुन सफल मित्रलाई धेरै धेरै बधाई । अझै बढी सक्रियताको अपेक्षा गर्दछु ।
Comment by Binaya Shekhar on February 1, 2012 at 5:28pm
Congratulations Mitralai for being featured as Blogger of The Week. Looking forward to your contribution in MeroReport.